शिल्पाले प्रकाशलाई मुद्दा हाल्ने, के हो शिल्पाको नया लफडा ? (भिडियो सहित) - www.dthreeonline.com
शिल्पाले प्रकाशलाई मुद्दा हाल्ने, के हो शिल्पाको नया लफडा ? (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र २९, २०७७ समय: १६:२३:५४
ईटहरी/ विवाद, आलोचना र ट्रोलको सिकारमा पर्ने हाम्रा नायक नायिकाहरु सम्बन्ध उथलपुथलमा पनि निकै अगाडि छन् । कहिले डिभोर्सका कुरा त कहिले झगडाका । झगडा र डिभोर्सको दलालबाट अझै पनि छुटकारा पाउन नसकेको जोडि हो अभिनेत्री शिल्पा पोख्रेल र निर्माता तथा डिस्ट्रीब्युटर छबिराज ओझा । यी २ को लफडा अझै पनि अदालतमा बिचाराधिन छ । यता शिल्पा पोख्रेलमाथी भने अर्को लफडा आईपरेको छ । यसबारे हामिले केहिदिन अघि नै समाचार बनाईसकेका छौ । भोजपुरी फिल्म ‘जय सम्भु’ मा अभिनय गरेपछि सोही फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसंग अफयर छ भन्ने समाचार एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बजेपछि उनि तनाबमा परिन् ।
हामीसंग कुरा गर्दै शिल्पाले ‘केश हार्ने पक्का भएपछि कसैको काधमा बन्दुक राखेर गोलि चलाउने काम भएको हो’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । हामिले फरक केस हैन र ? भन्दा सोही केसको यो अर्को पाटो हो भन्ने जावाफ पनि दिइन् । कुनै दिन प्रमाण समेत मिडियामा आउने कुरा हामिलाई सुनाएकी थिइन् । उनको सो भनाईले सिधै बुझ्न सकिन्छ कि, कोमल अर्थात सोनुको श्रीमती छबिराजको खटनमा चलेकी छन । अर्थात आफू हार्न लागेकोले छबिले कोमललाई हातमा लिए । शिल्पाको भनाई सिधै यतातिर जान्छ । तर, शिल्पा, सोनु र उनकि श्रीमती कोमल खत्री बिचको लफडाले किनारा पाईसकेको कुरा शिल्पाले सार्बजनिक गरेकी छन् । एक स्ट्याटस सहित फेसबुकमा उनले सोनु र कोमलको भिडियो सार्बजनिक गरेकी छन । हेर्नुस पुर्णपाठ सहितको भिडियो
यता कोमलले पनि सो रिपोर्टमा बजेको आफ्नो भिडियो पुरानो भएको र सोनुले शिल्पालाई समातेर तानेको भिडियोमा सोनु नभएको प्रष्ट पारेकी छन् । शिल्पाले स्ट्याटसमा “रजतपट’ नामक कार्यक्रममा संचारकर्मी प्रकाश सुवेदीले मेरो चरित्रहरण गर्नका निमित्त कतिसम्म निच हर्कत गरेका रहेछन त ? म मात्र होइन निर्माता निर्देशक सोनु खत्री र उहाँकी पत्नी कोमल खत्रीपनि उनको ‘पीत पत्रकारिता’को शिकार बन्नु भएको छ । तपाई लामो समयदेखि संचारगृहमा कार्यरत ‘पत्र…’ के भन्ने सम्बोधन पनि छैन । तपाई कुन सिद्धान्तमा टेकेर पत्रकारिताको मर्म मारिरहनु भएको छ ? नेपालमा प्रचलित ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’को सिद्धान्त के यहि हो ?
सम्मानित अदालतको विचाराधीन मुद्धामा कसैले पनि बोल्न उचित नहुने र कानुनी रुपमा नपाइने कुरा तपाई प्रकाश सुवेदीले बोलेर अदालतको मानहानी गरेको ठहर्दैन र ?” भनेर लेखेकी छन् । यो संगै अब उनी सुवेदीबिरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारिमा रहेको डिथ्री अनलाइनलाई बताइन् । अब हार-जितको कुरा आयो । कस्को हार कस्को जित भन्ने कुरा त आउने दिनमा पक्कै देखिने नै छ । यता सोनुले पनि आफ्नो सफाई दिएका छन् । एक भिडियोमा उनले आएको समाचार गलत रहेको बताएका छन् । सो भिडियोलाई पनि शिल्पाले सोही स्ट्याटसमा कोमलको भिडियो संगै राखेकी छन् ।
हटाईसकेको पुरानो भिडियो तथा स्ट्याटसलाइ राखेर रिपोर्ट बजाईएको सुवेदीमाथी आरोप लगाएका छन् । आफ्नो श्रीमती कोमल अगाडी देखिनै डिप्रेसनमा रहेको र यो रिपोर्टले झनै डिप्रेसनमा गएको उनले बताएका छन् । पत्रकार सुवेदीपनि प्रायः विवादको भुमरिमा परिरहन्छन । उनको लागि यो नया भने हैन । सोनुले उनलाई रिपोर्ट सच्याउन आग्रह गरेका छन् । नत्र, अर्को कदम चाल्ने उनले चेतावनीसमेत भिडियो मार्फत दिएका छन् । अब यो लफडाले कहिले सम्ममा किनारा पाउला त ? शिल्पा पनि भन्छिन् ‘कसैसंग काम गर्दैमा अफयर हुदैन’ । सोनुले पनि साथिमात्र रहेको बताए । पक्कै पनि, यो भनाईले कत्तिको सार्थकता पाउला त ? त्यो आगामी दिनले बताउने नै छ ।
इटहरी/ नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले आयोजना गरेको ‘जातिय विभेदबिरुद्ध लघु चलचित्र प्रतियोगिता’मा नेपाल चलचित...
काठमाडौं/ ग्रामिण परिवेशका भिडियोहरु ‘मुना’, ‘वशन्त शिशिर’, निर्देशन गरेर चर्चा कमाएका निर्देशक नविन भट्टको निर्देशनमा न...